International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Statement: CSOs Forum Statement on Upcoming Multi-party General Elections
Statement: CSOs Forum Statement on Upcoming Multi-party General Elections
Constitutional amendments have failed, the nationwide ceasefire agreement lacks inclusiveness, the general living standards of populations is below the poverty line, farmers and workers' rights have been ignored, and peaceful protests against the National Education Law were violently cracked down upon. We strongly believe that the upcoming general elections held under such circumstances are notaway out, noracomplete solution to the many underlying political and social crises the country is facing today. The upcoming general elections have to be held inafree and fair manner, and only then it will serve as an early step for Myanmar to begin genuine democratic reforms.
Soe Tun +95 (0) 973493467
Theinny Oo +95 (0) 9261207261
Thwin Lin Aung +95 (0) 250795915
Khin Lay +95 (0) 9256080897
[Myanmar CSO Forum Coordination Committee comprises of many prominent civil society organizations' leaders and was formed during the Civil Society Organization Forum held in October 2014. Civil Society Organization Forum was one of the most comprehensive events, participated by more than 650 representatives from 257 organizations and networks from around the country as well as the Thailand-Burma border.]
1. National Network for Education Reform (NNER) (Comprised of more than 200 member organizations)
2. Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) (Comprised of 449 member organizations)
3. Lands in Our Hands (LOH)
4. Forum for Democracy in Burma (FDB)
5. Network for Democracy and Development (NDD)
6. Women's Organizations Network (WON)
မကြာမီကျင်းပတော့မည့် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်
ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးအလွန် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲကြီး၏ရလဒ်ကို တစ်ဖက်သတ်မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ပြီးနောက် (၂၅) နှစ်အကြာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှု အထမ မြောက်ခြင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသည် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုမရှိခြင်း၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု၏အခြေခံလူနေမှုဘဝများ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနိမ့်ကျနေခြင်း၊ အလုပ်သမားများနှင့်လယ်သမား များ၏ တောင်းဆိုမှုများ လျစ်လျှူရှုခံနေရဆဲဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသားပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်လှုပ်ရှားမှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ခဲ့ခြင်းစသည့် နောက်ခံအခင်းအကျင်းများဖြင့် ကျင်းပမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံနိုင်ငံရေးပြဿနာများနှင့် အကြပ်အတည်းများကို ဗျူဟာမြောက် အဖြေရှာရာတွင် ထွက်ရပ်လမ်းတစ်ခုမဟုတ်ဟု မိမိတို့မှအခိုင်အမာယုံကြည်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အားဖြင့်လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှသာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ အလားအလာ အစပြုခြင်းဟု ကောက်ချက်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခြေခံမဲစာရင်းများ အကြိမ်ကြိမ်မှားယွင်းနေမှုသည် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု၏ စစ်မှန်သော မဲပေးပိုင်ခွင့်၊ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၏ရလဒ်၊ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၏ လွတ်လပ်၍တရားမျှတမှု တို့အပေါ် အပျက်သဘောသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားတိုင်းရင်းသားဒေသများနှင့် ဘာသာစကားကွဲပြားသော တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင်နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ဖော်ဆောင်ရာတွင်လည်း အားနည်းချက်များစွာရှိနေသည်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပပံ့ပိုးမှုများစွာရရှိထားသော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ လူထုအပေါ် တာဝန်ပုံချလျက်ရှိခြင်းသည် တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုလုံးလုံးမရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ် နိုင်ပါသည်။
ထိုနည်းတူ လက်ရှိအာဏာရပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများအနေဖြင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိရေးအတွက် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအပေါ် မလျော်ကန်သည့်သြဇာကျင့်သုံး၍ဖိအားပေးခြင်း၊ အစိုးရဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကိုအချိန်ကိုက်ဖော် ဆောင်၍ တစ်ဖက်လှည့်မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း၊ တပ်မတော်၏ကျောထောက်နောက်ခံရှိသည့်အသွင် သွယ်ဝိုက်ပြောဆိုစည်းရုံးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လာမည်ဆိုလျှင်၊ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၏ သန့်ရှင်းမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုတို့ကို မြင့်မြင့်မားမားထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာရေးနှင့်လူမျိုးရေးကိုအသုံးချ၍သော်လည်းကောင်း၊ မသမာသော၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောနည်း လမ်းမျိုးစုံကိုအသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကို လုပ်ဆောင်မည့် အလား အလာများ၊ လုပ်ရပ်များအပေါ် နိုင်ငံတကာအစိုးရများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိကြောင်း တရားဝင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့လင့်ကစား၊ ထိုသို့သောလုပ်ရပ်များမှာ ရပ်တန့်လျော့ပါးလာခြင်းမရှိသည့် အပြင် ပိုမိုစိုးရိမ်ရသည့်အနေအထားများကို မြင်တွေ့လာနေရသည့်အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိအစိုးရတွင်လည်းကောင်း၊ အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းသည့်အာဏာရ ပါတီတွင်လည်းကောင်း လုံးလုံးလျားလျား တာဝန်ရှိသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ အာဏာရရှိရေးကို အကြောင်းပြုလျက်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မတူကွဲပြားမှုများအား ပိုမိုနက်ရှိုင်းခြားနားသွားစေရန် စေ့ဆော်မည်ဆိုလျှင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာသော အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကို စစ်စစ်မှန်မှန်လိုလားသည်ဟု ကောက်ချက်ပြုနိုင်ရန် ခဲယဉ်းမည်ဖြစ်သည့် အလျောက် လက်ရှိအစိုးရ၊ အာဏာရပါတီ နှင့် ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ပါတီများ၏ ရပ်တည်ချက်များ၊ သဘောထားများသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာသာဖြစ်သည်ဟုလည်း သုံးသပ်မိပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ မလျော်ကန်သောကိစ္စရပ်များကိုသာမက တိုင်းရင်းသားပါတီများအပါအ၀င် အတိုက် အခံနိုင်ငံရေးပါတီများအပေါ် ရွေးကောက်ပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် မလျော်ညီသောပြုမူပြောဆိုမှု များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့်၊ မသိကျိုးကျွံပြုနေခြင်း၊ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူရန်ပျက်ကွက်ခြင်းစသည်တို့သည် ကော်မရှင်၏ကြားနေမှု၊ သမာသမတ် ကျမှု၊ ဘက်မလိုက်မှုတို့ကို ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ချေလျော့နည်းလာစေမည့်အပြင်၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ၏ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအများစုအား ကိုယ်စားပြုနိုင်မှုအပေါ်တွင်လည်း ဆိုးကျိုးများသက် ရောက်စေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် သန့်ရှင်း၊လွတ်လပ်၍တရား မျှတနိုင်ခြေ လျော့ပါးလျက်ရှိနေလင့်ကစား မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများ၏ ရလဒ်သည် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအများစုကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ရန်နှင့် အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေများ ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်တို့အတွက် နေရာစုံ၊ ရှုထောင့်စုံမှ ကိုယ်အား၊ ဥာဏ်အားရှိသမျှ ပါဝင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။
ပူးတွဲပါအရပ်ဖက်လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု၏မဲပေးပိုင်ခွင့် လျော့ပါးစေမည့်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် မလွတ်လပ်သော၊ တရားမျှတမှုမရှိသော၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိသော အခြေအနေများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လိုက်ပြီး သန့်ရှင်းလွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအများစုကို ကိုယ်စားပြုသည့်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုလျက် ထိုရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နှင့်အညီသာ အစိုးရသစ်များနှင့်လွှတ်တော်သစ်များကို မပျက်မကွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်တို့မှာ လက်ရှိအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် နှင့် အာဏာရပါတီတို့၏ အလုံးစုံသောတာဝန်များဖြစ်ပါကြောင်း အလေးအနက် တိုက်တွန်း၊ အသိပေး၊ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
၁။ ကိုစိုးထွန်း (၀၉ ၇၃၄၉၄၃၆၇)
၂။ မသိန္နီဦး (၀၉ ၂၆၁၂၀၇၂၆၁)
၃။ ကိုသွင်လင်းအောင် (၀၉ ၂၅၀၇၉၅၉၁၅)
၄။ မသူသူမာ (၀၉ ၅၀၀၅၅၂၂)
အောက်ပါ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ရက်များမှ ထောက်ခံပါသည်။
၁။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးကွန်ရက် (NNER) (အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်း ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။)
၂။ Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) (အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်း ၄၄၉ ဖွဲ့)
၃။ Lands in Our Hands (ဒို့မြေကွန်ရက်)
၄။ Forum for Democracy in Burma (FDB)
၅။ Network for Democracy and Development (NDD)
၆။ Women's Organizations Network (WON)